CHEAT ENGINE ကိုအားလုံးကိုတန်ဖိုးများကို SELECT လုပ်နည်း - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
Cheat Engine ကိုအားလုံးကိုတန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်ပါ
မကြာခဏတစ်ခါတစ်ရံအခွအေနနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ပုံများ, အတူအလုပ်လုပ်သူကိုအသုံးပြုသူများကွန်ပျူတာပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပုံတစ်ပုံကိုကြာပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ရသောအခါတူညီပုံရိပ်ဖိုင်များကိုအများအပြားမဟုတ်, သူတို့ကအာကာသနိမ့်ဆုံးကိုတက်ယူ, ဒါပေမယ့် "သိမ်းပိုက်" ဟုအဆိုပါ hard drive ကိုတစ်သိသာသောအဘို့ကိုပွားဘယ်မှာအမှုပေါင်းရှိပါတယ်, သူတို့၏လွတ်လပ်သောရှာဖွေရေးနှင့်ဖယ်ရှားရေးအတွက်အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အကူအညီမိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုလာပါတယ်။ ဒါဟာသူမအကြောင်းနှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
ကြောင့်မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုအသုံးပြုသူ hard drive ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ထားတဲ့ပုံတူပုံများ, ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူသို့မဟုတ်တူညီဓာတ်ပုံများကို၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း၏ရလဒ်စကင်ရဲ့အဆုံးမှာထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေရှာတွေ့နေတယ်ဆိုရင်, အသုံးပြုသူအနည်းငယ်ကလစ်မှာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုပုံစံအတွက်သီးခြားဖိုင်ထဲမှာရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုကယ်တင် « DPFR »။ သင့်အနေအပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်ကိုပရိုဂရမ်ဖိုင်တွဲထဲမှာရှာတှေ့နိုငျ "စာရွက်စာတမ်းများ".
နှိုင်းယှဉ် wizard ကို
ဒါကဝင်းဒိုးမိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder တွင်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် «နှိုင်းယှဉ် wizard ကို» အသုံးပြုသူအချို့ parameters တွေကိုချမှတ်နှင့်အတူတူပင်ပုံရိပ်တွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မည်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ထပ်တူများကိုများ၏ tracing ဘို့ယခင်ကဖန်တီးပြခန်း, ဖိုင်တွဲဒေသခံ drive ကို, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပုံရိပ်တွေကြားကပင်တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သုံးနိုင်တယ်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုဖိုင်တွဲအသုံးပြုသူတည်ရှိသောအပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေတစ်ပြခန်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်တစ်ခုတည်းဖိုင်ထဲမှာရှိသမျှသောရုပ်တုဆင်းတုအုပ်စုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖိုင်တွဲစာရွက်စာတမ်းများအစီအစဉ်၏အခြားအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကနေအတူတူတစ်ဦးတည်းသာ image ကိုထားခွင့်ပြုပါတယ်။
အရေးကြီး! အဆိုပါပြခန်းဖိုင်တစ်ဖိုင် format နဲ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည် « DPFG » နှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိရာနေရာတစ်ခုတည်းတည်ရှိသော။
ကို formats ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ပံ့ပိုးမှု;
အခကြေးငွေ-based အစီအစဉ်ကို (5 ရက်အတွင်းအစမ်းကာလ) ။
မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုထပ် image ကိုရှာဖွေရေးအဘို့ကြီးစွာသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်လျင်မြန်စွာရှာတွေ့ရုံသင့် hard disk ပေါ်မှအာကာသကိုတက်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းထပ်ပုံရိပ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်ကိုကြာကြာရုံးတင်စစ်ဆေးငါးရက်ကြာကာလကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်, သင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကနေ key ကိုဝယ်ယူရန်ရပါလိမ့်မယ်။
မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကိုအစမ်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Cleaner မိတ္တူပွားဖိုင်ဖယ်ရှားရေး ဖိုင်မှတ်တမ်း Detector Duplicate ImageDupeless
မိတ္တူပွားဓာတ်ပုံ Finder ကို - သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထပ်ပုံရိပ်တွေရှာဖွေဖြင့် hard disk ကို၏နေရာလွတ်တိုးမြှင့်, အမြဲတမ်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: How To Use The Cheat Engine In Any Game (စက်တင်ဘာလ 2019).